कला साहित्य – JanaSanchar.com
हिजो तिमिले तानाशाह र नोक्कर शाही बिरुद्ध लद्नु पर्छ, दुश्मनका किल्ला भत्काउन पर्छ भन्यौ! हामिले हुन्छ भन्यौ। तिमिले पुजिपती र दलाल बिरुद्ध आवाज उथाउनु पर्छ जनताको शासन ल्याउनु पर्छ भन्यौ! हामिले हुन्छ भन्यौ। तिमिले पुजीवाद बिरुद्द लड्नु पर्छ, जनता को जनबाद ल्याउनु पर्छ भन्यौ! हामिले हुन्छ भन्यौ। तिमिले वर्गीय संघर्ष गर्नु..
======= म कुनै बिद्रोही , र आतंककारी हैन, तर आज मलाई ,एक थान संविधान जलाउन र च्यत्न मन लागिरहेको छ। किनकी मेरो देशको संबिधानमा बलात्कारीलाई फासिको ब्याबस्था छैन। जिन्दगी भरी मानव अधिकारको लागि लड्ने मान्छे म । हत्याहिंसा बिरुद्ध आवाज उठाउने मान्छे म। तर आज मलाई एउटा हत्या हेर्न मन लागि रहेको छ। बालिका बलात्कारगर्ने..
जिल्ला कारागार अगाडि हिड्दै थिए । पुग्ने कुनै गन्तव्य थिएन ।कहाँ जाने केही थाहा थिएन । कहिलेकाही बिना योजना रानी वन पुग्थे ।गीतका प्लट खोज्थे । आफ्नै सुरुमा थिए । जीवन ....जीवन जी ..... ओ जीवन कमरेड ..... चर्को स्वरमा एक जना युवक करायो । पछाडि फर्केर हेरे ।सोचे मेरो जनयुद्धकालिन नाम कस्लाई थाहा होला र? अब सबैले बिर्सी सके ।यो मान्छेले अरु कसैलाई..
कबिता : फेरि बन्दुक समात्नै पर्ने भएको छ – रमेश रावत”विक्रान्त”
अस्ति मैले बन्दुक समातेको फोटो राखेर फेसबुकमा स्टाटस लेखें "वर्गीय मुक्तिका लागि फेरी बन्दुक बोक्नुपर्ने बेला आएको छ। " अनि बिदेशमा भएको अंकलले मलाई भिडियो कल गरी सोध्नुभयो आजभोलि नेपालमा के भएको छ ? अनि मैले भने सुन्नुहोस् यहाँ धेरै भएको छ जनयुद्धको नायक दुई चोटी प्रधानमन्त्री भएको छ आजभोलि पोईल गएर घराना भएको छ उसकै कार्यकर्ता..
कविता: बालुवामा पानी- परशुराम कोइराला
तिमी मालिक बन्दै जाऊ चारहजार वर्षयताका शीतयुद्धहरू बिर्सेर लाखौंझैं,हामी नोकर हुँदैजाने छौं र फूल चढाउँछौं गोडा मिचेकै हौं,मिच्छौं फेरि केवल एकसय साठी शान्तिवर्ष सम्झेर दक्षिणा चढाएकै हो,चढाउँछौं फेरि युद्धका इतिहासहरू बिर्सेर लुगा,भाँडा धोएकै हौं,धुँला फेरि,धुनेछौं जिन्दगी सङ्घर्ष भन्ने बिर्सनु छैन अजम्बरी छैनन् ,छैनौं..
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा निधन, नेपाली सेनाले बिशेष सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गर्ने
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौैंको लाजिम्पाट स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको छ । केही समयदेखि अस्वस्थ्य रहेका घिमिरेको निजी निवास लैनचौरमा निधन भएको बताइएको छ । यसैबीच राष्ट्रकवि घिमिरेको अन्त्येष्टि बुधबार भोलि विहान १० बजे गरिने भएको छ । अन्त्येष्टिमा नेपाली सेनाले विशेष..
थुइक्क ! मान्छे खाने अमान्छे तिमी ! मान्छे तर्साउने वनमान्छे तिमी !! हे ! ठूलो जातको हुँ भन्ने दम्भ र अहङ्कारको डङ्गुरमाथि चढेर नवराज विकहरुको जिन्दगीमा तिर हानी भोग खाने तिमी ! एकपटक अाफ्नो छातिमा हात राखेर अाफैलाई सोध त ! के तिमीहरुलाई एक्काइशाैँ शताव्दीमा अनुहार देखाउन लायक मानव हुँ भन्ने लाग्छ ? म त तिम्रो घिनलाग्दो डङ्गुर भन्दा धेरै..
यात्रा समाजबादको भनौ , निजिलाइ सरकारीको हेरालो राखौ नक्सा तयार पारौ तर पारित नगरौ ढोका बन्दै राखौ झ्यालबाट एमसिसि छिराऔ हुनेखानेहरु बाचेकै छन शताब्दी बाचुन केहिले धन्य सरकार भन्छौ :अरुले जय होस भनौ... (लेखक क्षितिज सापकोटा सत्तारुढ नेकपाको भात्री संगठन साबिक अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रिय सचिब एबम गण्डकी संयोजक हुन्। यो कबिता उनको..
“फूलको अवसान” : पुष्प बिश्वकर्मा
सदियौ गाए गितमा , मानी जन का हितमा, तिम्रा विजयका जुलुसमा, ठानी हितमा मुलुकका, बगैचा सुन्दर यै देश मानी, जनलाइ यसका फूल ठानी, बसे थे मौनता मा........! जब.... हिर्कायौ आगाका फिल्का हरु, मिल्कायौ आशाका झिल्का हरु, न्याय, अधिकार समानताका.. खन्याइ छर्राहरु बगैचा,फुलमा, हिंसाका विभेदका...... अपराधि लुकाइ , पिडित झुकाइ, तब...... फूलहरुको अवसान भयो , फूल हरु आगो..